Wararkii Ugu Dambeeyey ee Shirka Golaha Amniga iyo Qodobada Laysku Hayo Qaar – Radio Daljir
Wararkii Ugu Dambeeyey ee Shirka Golaha Amniga iyo Qodobada Laysku Hayo Qaar
Luulyo 7, 2017 5:30 b 0
Caqabad cusub ayaa ka soo if baxday shirka Golaha Amniga Qaranka oo maalintii 3aad ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo shirkan oo lagu waday in maanta la soo gaba gabeeyay uu dib ugu dhacay kala aragti duwanaan ka dhashay qodobada qaar ee laga doodayay.
Wararka aynu heleyno ayaa sheegaya in Madaxda ay durbaba isku qabteen qaabka dhismaha ciidamada iyo habka lagu sameynayo, iyadoo shirkii hore la isku afgartay in la dhiso 18 kun oo askari, kuwaas oo min 3 kun askari uga imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirka ka soo jeediyey in hanaan awoodeed lagu qaybsado ciidanka qaran ee ladhisayo, islamarkaana dowladda dhexe ay ka caddaalad samayso arrimahaasi.
Madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug Cali Cabdullaahi Cosoble iyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa soo jeediyay in arrinta amniga aan la siyaasadeyn, isla markaana qabiil la hoos-geyn.
Sidoo kale Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in wixii amni ku saabsan aan dood laga keenin, hadii kalena ay dib u dhac ku keeni karto dhismaha ciidamo qaran oo awood leh.
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa dadaal ugu jira in arrinta dhismaha ciidamada ay noqoto mid dowladda Federaalka maamulkeeda lahaato, isla markaana maamul goboleedyada ay talo kaliya ku yeeshaan.
Shir Looga Hadlayey Bixinta Canshuuraha oo Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho
Qaybtii Labaad ee Murti iyo Madadaalo: Aroos ka Dhacay Baadiyaha Garoowe (daawo)